Shiinaha Dibromomethane Soo-saar iyo Warshad | Mingxing
CAS MAYA ： 74-95-3
Foomka Molecular: CH2Br2
Miisaanka molikalka: 173.83
Muuqaal: dareere hufan oo aan midab lahayn
Barta dhalaalka - 52oC
Bar kuleylka 96-98oC (shiday)
Cufnaanta 2.477g / mlat 25oC (shiday)
Cufnaanta uumiga 6.0
Cadaadiska Uumiga 34.9mmhg (20oC)
Isweydaarsiga isbeddelka N20 / d1.541 (sh.)
Bar dhibic 96-98oC
Isticmaalka ugu muhiimsan: sida dhexdhexaadka ah ee sunta cayayaanka, Dibromomethanewaa sheyga ceyriin ee ugu weyn soo saarista nooc cusub oo tayo sare leh, fangas-ballaadhan, iyo waliba walxo cayriin oo loogu talagalay acaricides tonnage weyn. Dibromomethane waa ilaaliye olol wanaagsan. Ku darista Dibromomethane polymer waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa kuleylka gubashada ee balaastikada.
Waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay maadada ceyriinka ee isku-dhafka organic, dareeraha, qaboojiyaha, ololka retardant iyo wakiilka antiknock, jeermiska iyo jeermiska daawada.
Daaweynta degdegga ah ee daadashada: si dhakhso ah uga saar shaqaalaha meelaha wasakhaysan ee daadanaya una gudub aagga aaminka ah, go'doomi oo si adag u xaddid gelitaankooda. Dabka ka jar. Waxaa loo soo jeedinayaa in shaqaalaha daweynta degdega ahi ay xidhaan qalabka neefsashada ee isku kalsoon iyo dharka kahortaga dabka. Iska jar ilaha ka daadanaya sida ugu macquulsan si looga hortago inay soo gasho booska xaddidan sida bullaacad iyo godka ay ka baxayaan daadadka. Daad bax yar: dhuuq ama ku dhuuqo ciid ama waxyaabo kale oo aan guban karin. Qadar baxsi badan: samee dhak ama god qod si aad uqaado. Ku dabool xumbo si aad uyareeyso waxyeelada uumiga. U wareeji gaariga taangiga ama aruuriyaha gaarka ah bamka, dib-u-warshadaynta ama u qaad goobta qashinka lagu daadiyo si loogu tuuro.
Waxqabadka catalytic ee CE Mn oxides for gubidda Dibromomethane: CE Mn oxides composites iyo hal qayb CE, Mn oxide catalysts waxaa lagu diyaariyey habka isdhaafsiga, iyo waxqabadyadooda kicinta ah ee gubida Dibromomethane ee gaaska dabada ah ee qiiqa PTA ayaa la baaray, Qaab dhismeedka madadaalada ee kaabayaasha waxaa lagu gartaa H2-TPR. Natiijooyinka waxay muujiyeen in oksaydhka isku-darka ah ee CE Mn ay sameeyeen qaab-dhismeed xalka adag oo isku mid ah Mn3 + oo galaya shaashadda CeO2, isla markaana leh waxqabadka yaraynta heerkulka hooseeya. Waxqabadka gubashada kicinta ee kalleeyeyaasha ee Dibromomethane waxay si aad ah uga fiicnayd tan kaliya ee ka kooban CE iyo Mn oxides, Marka mugga jajabka ee Dibromomethane uu yahay 0.4% ~ 1.0% xawaare ahaana uu ka yar yahay 24 000 H-1, beddelka Dibromomethane waxay ka badan tahay 95%, wadarta wax soo saarkana waa Br2 iyo HBr waxay gaari karaan in ka badan 83%
Xirxirida: 230kg / durbaan.
Awood sanadeed: 2000 tan / sanadkii